च्याम्यिन्स लिगः अन्तिम १६ मा आठ टोली, आज कोसँग को भिड्दै ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर २०, २०७४०७:२५
काठमाडौं, २० मंसिर । आज राति च्याम्यिन्स लिग अन्र्तगत समुह चरणका अन्तिम खेल हुँदैछन् । मंगलबार राति समुह ‘ए’, ‘बी’, ‘सि’ र ‘डी’ का अन्तिम खेल भइसेका छन् ।
जसबाट आठ टोली अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेका छन् । समुह ‘ए’ बाट म्यानचेस्टर युनाइटे (समुह विजेता) र एफसी बसेल अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेका छन् । यस्तै समुह ‘बी’ पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) समुह विजेता र बार्यन म्यूनिख अर्को चरणमा पुगेका छन् । समुह ‘सी’ बाट रोमा (समुह विजेता) र चेल्सीले नकआउट चरणमा स्थान पक्का गरेका छन्, भने समुह ‘डि’ बाट बार्सिलोना (समुह विजेता) र युभेन्टस पनि अन्तिम १६ मा पुगेका छन् ।
आज कसको भिडन्त को सँग ?
आज समुह ‘इ’, ‘एफ’, ‘जी’ र ‘एच’ का खेल हुनेछन् । सबै खेल राती १ः३० हुनेछन् । समुह ‘इ’ अन्र्तगत इंग्लिस क्लब लिभरपुल र रसियाको स्पार्टा मस्को भिड्दैछन् । खेल लिभरपुलको मैदानमा हुनेछ । यही समुहमा रहेका सेभिल्ला र स्लोभेनियाको मारिबोरबीचको खेल मारिबोरको मैदानमा हुनेछ । यो समुहमा ९ अंक जोडेर लिभरपुल पहिलो र ८ अंक जोडेको सेभिल्ला दोस्रो स्थानमा छन् ।
यस्तै समुह ‘एफ’ मा रहेका इंग्लिस टोली म्यानचेस्टर सिटी र युक्रेनको शख्तर डोनेट्स्कबीचको खेल शख्तरको मैदानमा हुँदैछ । यही समुहमा रहेका इटालियन क्लज नापोली नेदरल्याण्ड्सको फेयनुर्डले बीचको खेल फेयीनूर्डको मैदानमा हुनेछ । यो समुहमा १५ अंक जोडेर सिटी पहिलो स्थानमा र ९ अंक जोडेको डोनेट्स्क दोस्रो स्थानमा छन् ।
समुह ‘जी’ मा रहेका टर्कीको बेसिक्तास र जर्मनीको आरबी लेप्जिगबीचको खेल लेप्जिगको मैदानमा हुँदैछ । यही समुहमा रहेका पोर्चुगलको एफसी पोर्टो र फ्रान्सको मोनाको बीचको खेल पोर्टोको मैदानमा हुँदैछ । यो समुहमा ११ अंक जोडेको बेसिक्तास पहिलो र ७ अंक जोडेको पोर्टो दोस्रो स्थानमा छन् ।
समुह ‘एच’ मा रहेको स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड र जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमण्डबीचको खेल मड्रिडको मैदानमा हुनेछ । यही समुहमा रहेको इंग्लिस क्लब टोटनह्याम हट्सपरले साइप्रसको अपोईल निकोसियाको सामना गर्नेछ । खेल टोटनह्यामको मैदानमा हुनेछ । यो समुहमा १३ अंक जोडेको टोटनह्याम पहिलो र १० अंक जोडेको रियल दोस्रो स्थानमा छन् ।
प्रतियोगितामा समूह ‘इ’ को शिर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुललाई समूह विजेता बन्न आजको खेलमा जित आवश्यक छ। समूह ‘एफ’ को शिर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेष्टर सिटि यसअघि नै नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
समूह ‘जी’ को शिर्ष स्थानमा रहेको बेसिक्तास पनि अन्तिम १६ मा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यस्तै समूह ‘एच’ को शिर्ष स्थानमा रहेको टोटनह्याम र दोस्रो स्थानमा रहेको डिफेन्डिङ् च्याम्पियन रियल मड्रिड अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन।
प्याराग्लाइडिङ विश्वकप हुने, प्रथम हुनेलाई १५ सय युरो
ए डिभिजन लिग : मनाङ्को विजयी शुरुवात
साउदी अरेविया माथि ब्राजिलको सहज जित
युभेन्टसको प्रश‌ंसा गर्दै रोमेलु लुकाकुले देखाए खेल्ने इच्छा, के रोनाल्डो र लुकाकुसँगै खेल्लान ?